စကစ လက်အောက်က ကျောင်းဆရာမလေး တဦးကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောတဲ့အခါ…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > စကစ လက်အောက်က ကျောင်းဆရာမလေး တဦးကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောတဲ့အခါ….
စကစ လက်အောက်က ကျောင်းဆရာမလေး တဦးကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောတဲ့အခါ….
ဒီမှာ ရှင်.. မယောင်မလည်နဲ့ ဒီကျောင်းနားမှာဝေ့လည် ဝေ့လည်လုပ်နေတာကြာပြီ။ ကျောင်းထဲကပစ္စည်း ဘာအလစ်သုတ်မလို့လဲ။ “ဟာ မ …မဟုတ်ပါဘူး ဆရာမ ” “ကျော်က ကျောင်းထဲကပစ္စည်းစိတ်မဝင်စားဘူး။” “ရှင်” “အာ့ဆို ရှင်က ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲ”
“ဆရာမကို” “ဘာ” ကျမကို ဟုတ်လား” “ဟာ ဆရာမ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. ကျော်တောင်းပန်ပါတယ်” “ရှင်က လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလား” “ခင်ဗျာ ဟို … ဟို အဲ လောက်တော့ ကျော်မစဉ်းစားရသေးဘူး”
“ဒီမှာ ကျမတို့ စကစ ပညာရေးဌာနမှာ အစမ်းခန့်ဆိုတာမရှိဘူး၊ ခန့်မယ်ဆို တခါထဲခန့်တယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာမကို ရည်းစားထားချင်ရင် စမ်းသပ်ကာလဆိုတာမရှိဘူး။ လက်ထပ်ဖို့ သေချာမှရည်းစားစကားပြော ဟုတ်ပြီလား”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို ” “နေပါအုန်း စကားပြောလို့မပြီးသေးဘူး ရှင့်။ စကစ လက်အောက်က ဆရာမကို လက်ထပ်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေပါစဉ်းစား။ “ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါခင်ဗျာ”
“ကျမတို့က မဲရုံမှုးလုပ်ရတယ်။ “ပြည်ထောင်စုနေ့” “လွတ်လပ်ရေးနေ့” “အာဇာနည်နေ့” “ဒီဇင်ဘာအားကစားလ လမ်းလျှောက်ပွဲ မနက် ၄ နာရီထပြီးလိုက်ပို့ရမယ်။ မဲရုံမှာ ညဉ့်နက်နေရင် ညအိပ်စောင့်ပေးရမယ်။ စနေ / တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်ဆိုတာရှိတော့ရှိတယ်။
လိုအပ်ရင် စနေဖြစ်ဖြစ် တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတက်ရတယ်။ စနေ/ တနင်္ဂနွေရယ်လို့ အတူနေရမယ်မထင်နဲ့။ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးအတွက်ရပ်ကွက်ထဲမှာ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ကျောင်းသားစာရင်းလိုက်ကောက်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အခါ ရှင်လိုက်သင့်ရင်လိုက်ရမယ်။ အမူးသမားတွေ အိမ်မှာ စာရင်းကောက်တဲ့အခါအရစ်ခံရတာများတယ်”
“ရှင် ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက်ကော ရလား၊ မေးခွန်းနဲ့အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းက အလှည့်ကျရေးရတာ အပြင်မှာမပေါက်ကြားအောင် အိမ်မှာပဲ စာစီရတာ၊ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းအောင်လုပ်ထားပါ” “နောက်ပြီး လစဉ်ဖြေတဲ့ရမှတ်တွေ ခုနှစ်ကြိမ်ပေါင်း ခုနှစ်နဲ့စား ပျမ်းမျှရှာ၊ အပေါင်းအနှုတ် အမြှောက်အစား ရှင်ကျွမ်းကျင်ရဲ့လား၊ လိုအပ်ရင် ရှင် ကူလုပ်ရမယ်”
“အဓိက အလုပ်က အစိမ်းရောင် ကောင်ကြီးတွေ လာရင် မြက်နှုတ်ပြရမယ်။ ကလေးတွေ စာတကယ် တတ်တာ မတတ်တာထက် ကျောင်းတွေ အရမ်းတက်ပါတယ်ဆိုပြီး စာရင်းပြရမယ်။ ကျူရှင် အတင်းတက်ခိုင်းရမယ်။ ဖားရင်းနဲ့ တက်သွားတဲ့ ဖားလက်တက်လို လုပ်ရမယ်။ ပြီးရင် အပီအပြင် ‘မ’ ပြရမယ်”
“ထမင်းဟင်းကတော့ အမြဲတမ်းစိုစိုပြေပြေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်ရင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်ရမယ်။ အဝတ်အစား လျှော်ဖွပ်တာ မီးပူတိုက်တာ ကျွမ်းကျင်ရဲ့လား။ မယားက လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်နဲ့။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ဆရာမတွေဟာ ကျောင်းမှာ ပြန်ပြောခွင့် မရသ၍ အိမ်ကျရင် ပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်။ ဒါလေးတွေပါ ထည့်စဉ်းစားပါ။
“ဂျာ” “ကျော်” ဒီကျောင်းရှေ့ကို နောက်မလာတော့ပါဘူးဂျာ” “ကျော်” လူပျိုကြီးပဲလုပ်ပါတော့မယ်။
Previous Article ဂျမ်း တောလေးရဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခု ကြောင့် အံ့သြ ပြီးမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်း ခဲ့ရတဲ့သရုပ်ဆောင် စည်သူပလပ်ကျွတ်ရဲ့ ဗီဒီယို
Next Article ရေကြည်နယ်တွင် ရှေ့ဟောင်းဘုရားများ တွေ့ရှိ…